BunnyStudio: Mitadiava talenta matihanina amin'ny feo matihanina ary tanteraho haingana sy haingana ny tetikasanao audio
Alatsinainy, Jolay 26, 2021 Alatsinainy, Jolay 26, 2021 Douglas Karr
Tsy azoko antoka hoe maninona no misy olona manodina ny mikrô findainy ary manao asa mahatsiravina mitantara horonan-tsary na rakipeo matihanina ho an'ny orinasany. Ny fanampiana feo matihanina sy ny feon-kira dia tsy lafo, tsotra ary mahatalanjona ny talenta any. BunnyStudio Na dia mety halaim-panahy hitady mpandraharaha amin'ny lahatahiry isan-karazany aza ianao, i BunnyStudio dia kendrena mivantana amin'ireo orinasa mila fanampiana am-peo matihanina amin'ny doka audio, podcasting,
Zoma, Jolay 23, 2021 Zoma, Jolay 23, 2021 Douglas Karr
Tsy azoko lazaina aminao ny fitaovana rehetra nampiasako na nosoratako taloha mba handraisana am-peo lavitra ny resadresaka podcast - ary nanana olana tamin'izy rehetra aho. Tsy maninona ny hatsaran'ny fifandraisako na ny kalitaon'ny fitaovana… ny olana momba ny fifandraisana tsy tapaka sy ny kalitaon'ny feo dia nahatonga ahy hanipy ny podcast foana. Ny fitaovana mendrika farany nampiasako dia ny Skype, saingy tsy nihanaka ny fananganana ilay fampiharana ka ny ahy
Ireo mpanjifa dia mividy amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny solo-sainanao, mitsidika pejy iray amin'ny takelaka hafa amin'ny takelaka iray, mampiasa finday avo lenta handefasana momba izany amin'ny media sosialy ary avy eo mivoaka ary mividy vokatra mifandraika amin'ny foibe fiantsenana eo akaiky eo. Ny tsirairay amin'ireto fihaonana ireto dia manampy amin'ny fampivoarana mombamomba ny mpampiasa feno, saingy sombim-pahalalana samy hafa avokoa izy rehetra, maneho ny isam-batan'olona. Raha tsy tafiditra ao izy ireo dia mijanona
Ny Camera IQ, sehatra famolavolana kaody tsy misy kaody ho an'ny Augmented Reality (AR), dia nanangana Virtual Try-On Composer, fitaovana famolavolana farany manatsara sy haingana ho an'ny marika amin'ny hatsaran-tarehy, fialamboly, fivarotana ary sehatra hafa hananganana traikefa fanandramana virtoaly miorina amin'ny AR. Ny vahaolana vaovao dia mieritreritra indray ny varotra AR amin'ny alàlan'ny famelana ny marika hametraka amin'ny fomba nomerika ny vokatr'izy ireo amin'ny zava-misy marina eo amin'ny fiainana ary manampy andian-dahatsoratra misy marika sy firoboroboana miavaka izay mampifandray sy mamporisika ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny
Alarobia, Jolay 14, 2021 Alarobia, Jolay 14, 2021 Douglas Karr
Mbola miasa indray aho miaraka amina orinasa iray izay mandao masoivoho iray ary miara-miasa amiko hanatsarana ny fisian'izy ireo ao amin'ny YouTube… ary mbola miverina manana ny kaontiny rehetra ihany koa ilay masoivoho niarahany niasa. Efa nitaraina momba ireo masoivoho izay manao an'io nandritra ny folo taona mahery aho izao ary nanoro hevitra ireo orinasa mba tsy hanao izany mihitsy. Ary tsy tokony hisy raharaham-barotra hanome fidirana sy fidirana amin'ny teny miafina hitantanana kaonty rehetra. Ny fomba mety
Inona ny fitantanana orinasa tag? Fa maninona no tokony hampiharinao ny fitantanana tag?
Alatsinainy, Jolay 12, 2021 Alatsinainy, Jolay 12, 2021 Douglas Karr
Ny verbe ampiasain'ny olona eo amin'ny sehatry ny indostria dia mety hampisavorovoro. Raha miresaka momba ny fanoratana amin'ny bilaogy ianao dia mety midika fa misafidy teny izay manan-danja amin'ilay lahatsoratra hametahana azy io ary hanamora ny fitadiavana sy ny fitadiavana azy. Teknolojia sy vahaolana hafa tanteraka ny fitantanana tag. Raha ny fahitako azy dia heveriko fa tsy dia misy anarana…… nefa io no fiteny mahazatra manerana ny indostria ka hanazava azy izahay! Inona no atao hoe Tag Management? Tagging
Linq: Mpanome ny vokatra karatra fandraharahana eo akaikinao (NFC)
Zoma, Jolay 9, 2021 Zoma, Jolay 9, 2021 Douglas Karr
Raha mpamaky ny tranokalako efa ela ianao dia fantatrao fa faly be aho mahita ireo kara-pifandraisana isan-karazany. Manana karatra fanamarihana paositra aho, karatra toradroa, karatra vy, karatra misy laminy… Ankafiziko tokoa. Mazava ho azy, miaraka amin'ny hidin-trano sy ny tsy fahafahany mandeha, tsy dia nilaina loatra ny karatra fandraharahana. Saingy misokatra izao ny dia, nanapa-kevitra aho fa tonga ny fotoana hanavaozana ny karatro ka hahazo